Omni Hotels and Resorts dia nametraka 248 isan-jato tamin'ny 2021
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » USA Travel News » Omni Hotels and Resorts dia nametraka 248 isan-jato tamin'ny 2021
Omni Hotels and Resorts dia nametraka asa maherin'ny 1,000 tamin'ny martsa 2021
Ny fametahana asan'ny Omni Hotels and Resorts no avo indrindra hatramin'ny aprily 2020
Omni dia namoaka asa maherin'ny 100 isan-kerinandro tamin'ny febroary 2021, ary nitombo 250 izany tamin'ny martsa 2021
Ny orinasa dia manangona amin'ny ambaratonga asa rehetra ho an'ny fananany manerana an'i Etazonia
Omni Hotels and Resorts dia nahita fiakarana tampoka tamin'ny fandefasana asa tamin'ny 2021, taorian'ny efa ho iray taona ny asa ambany karama. Ny angon-drakitra indostrialy farany dia mampiseho fa ny orinasa dia nametraka asa maherin'ny 1,000 tamin'ny martsa 2021, fiakarana 248% raha oharina tamin'ny volana janoary 2021, ary ny avo indrindra hatramin'ny aprily 2020. Ny karama'i Omni dia nanondro fa ny orinasa dia manangona manerana ny ambaratonga asa rehetra ho an'ny fananany manerana an'i Etazonia, ao anatin'izany ny hotely vaovao.
Hotely sy Resorts OmniIreo fananana dia be mpizahatany matetika amin'ny mpandeha voly sy fialan-tsasatra. Ny fameperana ny fitsangatsanganana izay napetraka tamin'ny taon-dasa dia nisy fiatraikany tamin'ny asan'ny Omni hatramin'ny nandraisan'ny orinasa mpiasa an-jatony maro. Na izany aza, nanomboka ny 18 Janoary 2021 dia nametraka asa 100 isan-kerinandro i Omni isan-kerinandro tamin'ny febroary 2021, ary nitombo 250 izany tamin'ny martsa 2021.
Ny firongatry ny fandraisana mpiasa any Etazonia dia mifandraika amin'ny paikadin'ny Omni nohavaozina ihany koa hampandehanana trano any amin'ny faritra tsy misy tanàna. Mahaliana fa namoaka doka asa ny orinasa tamin'ny martsa 2021 ho an'ny trano fandraisam-bahininy ao Minnesota, trano fandraisam-bahiny vaovao misy efitrano 1,000 any Boston izay kasaina hisokatra amin'ny 2021, ary ny Oklahoma City Convention.
Ankoatra ny lisitr'ireo doka momba ny asa an-tsokosoko isan-karazany, ny fanendrena ny filoha lefitry ny Marketing sy ny Strategy Strategy Mary Bennett, dia hanome tosika ny orinasan'ny orinasa satria toa mampiasa vola any amin'ireo toeram-pialofana.
Ny orinasa dia nandefa asa sahabo ho 100 eo amin'ny sehatry ny zokiolona hatramin'ny Janoary 2021, ary ny 50 dia navoaka tamin'ny martsa 2021 fotsiny. Ny asa lehibe dia misy toerana maro ho an'ny talen'ny varotra, talen'ny asa, talen'ny injeniera, talen'ny fifandraisana amin'ny orinasa, ary talen'ny spa. Asa marobe marobe no mifandraika amin'ny mpiasa miasa amin'ny hotely toa ny mahandro, mpiasa manadio, mpivarotra bartender, mpanampy ary mpampiantrano.